LeBron James dia efa manana ilay Beats Studio Buds vaovao | Avy amin'ny mac aho
Tsy zavatra tena fahita izany rehefa hanomboka ny vokatra iray fa mety hitranga fa ny sarin'ny vokatra iray mbola tsy natomboka teny an-tsena dia tafaporitsaka, ary amin'ity tranga ity dia inona no navoaka. Ilay kintana NBA, LeBron James, mitazona ny headphones an'ny Studio Buds…
Amin'ity tranga ity tsy misy isalasalana fa headphone ireto izay tsy eny an-tsena, ny endriny sy ny endriny dia mitovy amin'ilay namoaka ora vitsy lasa izay tamin'ny haino aman-jery ary ny loko fotsy dia manambara fa Beats Studio Buds vaovao izy io.
Azo inoana fa ny ora vitsy manaraka dia ho tonga zava-misy ireo headphone ireo ary hiseho amin'ny tranokala Apple na amin'ny pejy ofisialy Beats. Ary izany dia mihabe ny famoahana rehefa mandeha ny fotoana hatramin'ny nahatongavan'ny mari-pahaizana FCC, ny sary izay ahitanao ireo headphone ireo.
Apple, izay tompon'ny orinasa Beats, dia mikasa ny hanao ireo vaovao Beats Studio Buds amin'ny loko isan-karazany ary ny iray amin'izy ireo dia ny lasibatra asehon'i James amin'ireo sary ireo. Ny sisa amin'ny loko dia mena sy mainty lojika miaraka amin'ny boaty famenoana miendrika oval.
Mazava raha mikasa ny handefa ireo headphone vaovao ireo miaraka amin'ny AirPods andiany fahatelo na koa ny AirPods Pro faharoa ny Apple, ny efa voamarina mivantana amin'ity famoahana ity dia ny Ireo headphone amin'ny endrika Beats dia misy ary ho hita tsy ho ela.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » LeBron James dia efa manana ny Beats Studio Buds vaovao
Apple namoaka Safari Technology Preview 125